Iifilili zeCopper esongiweyo, ifoyile ye-Electrolytic Copper, i-Coil Sheet-Civen
Iifayile zeCopper eziqingqiweyo
Ifoyile ye-Electrolytic Copper
Ingcali yakho ekwenzeni izinto zesinyithi kunye neemveliso ezinxulumene nayo.
Izinto ezisemgangathweni ezizinzileyo kunye ezisemgangathweni zokwenza iimveliso zakho zikhuphisane ngakumbi.
Sisoloko sigcina umda wethu phezulu kwaye sizihlaziye.
Iimveliso zethu zamkelwe ziinkampani ezidumileyo kwihlabathi liphela.
2L Flexible Ubhedu khazi Laminate
Itheyiphu yokuNamathela yeCopper
Ukukhuselwa kweefreyili zobhedu ze-ED
I-HTE Electrodeposited Copper foil yePCB
Iifayile ze-ED zeCopper zeLi-ion Ibhetri (Ebengezelayo)
Ukuchaneka okuphezulu kweRA kopper
Iphathwe ngefoyile ye Copper RA
Umzimveliso ngumfanekiswana ngefoyile ye Copper
Ukukhokelwa yimakethi, kuqinisekiswe ngumgangatho.
Zigqithise ngokwethu kwaye silandele ukugqwesa!
Ungaze unike umsebenzi wanamhlanje ngomso
Intsebenziswano ngokunyanisekileyo, ukuvelisa izinto ezintsha kunye nomceli mngeni kwikamva.
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava
ISIQINISEKISO SOMCANGO esasekwa ngo-1998. Sisebenza ekuphuhliseni, ekuveliseni nasekujikelezeni izinto zentsimbi.
Ngenxa yenkampani esempilweni, siyazixhobisa ngezixhobo zemveliso eziphambili kunye nezixhobo zokulinganisa ubugcisa obuphezulu. Siqhubeka siphucula ubuchule bethu kunye nezixhobo ukugcina imida yethu kolu shishino.
Ukusebenza ngokugqwesileyo kwe-R & D
Icandelo lethu le-R & D belisebenza ekusebenzeni kwezinto zentsimbi ezintsha ukomeleza ubuchule obuphambili bequmrhu.
ukuvelisa nokujikeleza izinto zentsimbi.
Nge-16 ka-Agasti 2021
Yintoni ifoyile yobhedu ye-electrolytic (ED) kwaye yenza njani?
Ifoyile ye-Electrolytic yethusi, ikholamu yentsimbi eyakhiwe kakuhle, kuthiwa yenziwa ngeendlela zeekhemikhali, inkqubo yayo yokuvelisa ngolu hlobo lulandelayo: Ukunyibilikisa: Iphepha elenziwe ngombane elenziwe ngombane libekwa kwisisombululo se-sulfuric acid ukuvelisa isalf yobhedu.
Yintoni umahluko phakathi kwefoyile yobhedu ye-electrolytic (ED) kunye ne-roll (RA) yobhedu
Inkqubo ye-ITEM ED RA Inkqubo yokuvelisa → Ulwakhiwo lweCrystal → Uluhlu lokutyeba → Ububanzi obukhulu → Ubushushu obufumanekayo → Unyango lomphezulu Indlela yokufaka ikhemikhaliUlwakhiwo lwekholamu 6μm ~ 140μm 1340mm (ngokubanzi yi-1290mm).
Nge-13 ka-Agasti 2021
Inkqubo yokuThengisa iCopper kwiFektri
Ngomtsalane omkhulu kuluhlu olubanzi lweemveliso zeshishini, ubhedu lujongwa njengezinto eziguquguqukayo kakhulu. Iifoyile zobhedu ziveliswa ziinkqubo ezithile zokuvelisa ngaphakathi kwefoyile ebandakanya ukugoba okushushu nokubandayo. Kunye nealuminium, ubhedu lubanzi ...
UCiven ukumemela kumboniso （PCIM Europe2019）
Malunga ne-PCIM Yurophu2019 Umzi mveliso we-Electronics ubudibana eNuremberg ukusukela ngo-1979. Umboniso kunye nenkomfa lelona qonga liphambili lamazwe aphesheya libonisa iimveliso ezikhoyo, izihloko kunye nezinto ezihamba ngombane we-elektroniki kunye nokusetyenziswa. Apha ungayifumana ...
Ngaba iCovid-19 iyakwazi ukuSinda kwiiNdawo zeCopper?
Ubhedu yeyona nto iluncedo kakhulu kwiintsholongwane. Ngamawakawaka eminyaka, kude kudala ngaphambi kokuba bazi malunga neentsholongwane okanye intsholongwane, abantu bebewazi amandla e-copper okubulala iintsholongwane. Ukusetyenziswa kokuqala kobhedu njengesifo ...
Yintoni eqengqelekileyo (RA) ifoyile yobhedu kwaye yenziwa njani?
I-foil yobhedu esongelweyo, ifreyim eyakhiwe ngesinyithi, yenziwa kwaye iveliswe yindlela yokuqengqeleka ebonakalayo, inkqubo yayo yokuvelisa ngolu hlobo lulandelayo:
I-CIVEN Metal yinkampani egxile kuphando, uphuhliso, imveliso kunye nokuhanjiswa kwezinto eziphezulu zentsimbi
Inombolo 666 Xincun Road, Shanghai, 200333, PRChina.